हातमा डिग्रीको सर्टिफिकेट, पेशा- गृहिणी ? – Sandesh Press
October 16, 2021 186
उहाँ आउनु हुन्थ्यो, बच्चा बिरामी हुनासाथ बिदा लिएर। उहाँ घरमा आउँदा र माइतीघर जाँदा मात्र अलि राहतको सास फेर्न पाउँथे मैले। तर उहाँले दुई दिन आउँदा बच्चालाई गरेको स्याहार, मलाई गरेको सहयोग देखेर घरपरिवार मात्र होइन छिमेकी समेतको आँखा ठूलो-ठूलो हुन्थ्यो। एकदिन छोरीलाई छतमाथि नुहाइदिँदै गर्दा पल्लो घरबाट एक शिक्षित भाइले अचम्म मान्दै सोध्छन् – ए दाइ, भाउजू हुनुहुन्न र?
अर्को तिरबाट छिमेकी आन्टी चिच्याउँछिन् – बुहारी बिरामी छन् कि क्याहो बाबु, छोरीको लुगा आफैं सुकाउँदै छौ त।
उनको कुरा सुनेर मैले पनि मनमनै कल्पना यस्तो गरें – यदि घरमै बसेर बच्चा हुर्काउने काम गरेबापत हामीलाई पेशा, मातृत्व भन्ने टाइटल र सरकारी तलबको व्यवस्था हुँदो हो त! त्यो नभए पनि, बच्चा जन्मेपछि काम छोड्न पनि नचाहने र बच्चा छोड्न पनि नमिल्ने अवस्थामा हरेक कार्यालयमा ‘चाइल्ड केयर डिपार्टमेन्ट’ हुँदो हो त! यदि बच्चा या करियरमा एउटा रोज्नुपर्ने अवस्था नहुदो हो त! कसैले के गर्छौ भनेर सोध्दा डिग्री पासको प्रमाणपत्र दराजमा थन्काएर म कि काम गर्दिन गृहिणी हुँ भन्नुपर्ने थिएन सायद
Nextसाफ च्याम्पियनसिपको उपाधि जित्ने नेपालको लक्ष्य अधुरै, भारत आठौं पटक च्याम्पियन